पुरुषको कानबाट नै थाहा हुन्छ, कुन मानिस धनी र कुन कंगाल हुन्छ भनेर - Ektm news
Home›स्वास्थ्य›पुरुषको कानबाट नै थाहा हुन्छ, कुन मानिस धनी र कुन कंगाल हुन्छ भनेर
काठमाडौँ – कानको काम सुन्ने मात्र होइन । समुद्रशास्‍त्रका अनुसार कानले मानिसको भाग्‍य र व्यक्त‌ित्व समेत बताउँछ । त्यसैले तपाईले आफ्नो कान ऐनामा हेरेर आफ्नो अवस्था पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ । यदि तपाईको कान छोटो छ भने तपाईले दुखी हुनु पर्दैन । किनकी छोटो कान भएका व्यक्ति बुद्ध‌िमान हुन्छन् ।
भोलि सबै यातायात बिहानैदेखि चल्ने
वाइफाईको पासवर्ड चाहियो ? पत्ता लगाउन यसो ...
कोलेस्ट्रोल घटाउन डा. सुदिप केसीको टिप्स
बाँसको तामाले स्वास्थ्यलाई गर्छ यि फाइदा जुन तपाईलाई थाहानहुन सक्छ !
के तपाई वाइन पिउनुहुन्छ, हाशियार !
खुशीको खबर ! अब एक गोलीबाटै हुनेछ एचआईभीको उपचार ( सक्दो सेयर गरौ )
बिवाहित पुरूषको अन्तै लसपस: अब कसरी छुटाउने लत !
स्लिम बनाउन मद्धत गर्ने तरकारीका जुसहरु यस प्रकार छन्